अझै पनि सार्वजनिक सवारीहरु कोचाकोच, कोरोना भाइरसको जोखिम उत्तिकै « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
अझै पनि सार्वजनिक सवारीहरु कोचाकोच, कोरोना भाइरसको जोखिम उत्तिकै
७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १२:१८
कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड १९ का कारण मानिसहरुमा त्रास बढ्दै गएको भएपनि सार्वजनिक सवारी अझै पनि कोचाकोच, साथै कोरोना भाइरसको जोखिम उत्तिकै बढ्दै गएको छ ।
बिहीबार मध्यान्हमा बानेश्वरबाट पेप्सीकोला जान लागेकी उर्मीला पौडेललाई बसमा कोचिएर यात्रा गर्न मन थिएन । भीड देखेर दुईवटा बस छाडिसकेकी उनलाई तेस्रो बसले पनि निरास बनायो । उनी त्यसमै कोचिएर गइन् ।
भीडमा हिँड्दिनँ भनेर के गर्नु, खाली सिट भएको बस भेटे पो ।यस्तो समस्या अहिले सार्वजनिक सवारी चढ्ने अधिकांश यात्रुहरुको नै हुन्। सम्भव भएसम्म त आजभोलि धेरैले सार्वजनिक सवारी प्रयोग नै गर्न छाडेका छन् ।
तर, विकल्प नभएका यात्रुलाई भने कोचिएर यात्रा गर्नु बाध्यता नै छ ।अहिले काठमाडौंका सार्वजनिक सवारी चढ्नेमध्ये आधाजसो त मास्क लगाएरै यात्रा गरिरहेका छन् । तर, सार्वजनिक बसमा अझै पनि सुरक्षित वातावरण तयार हुन सकेको छैन ।
बुधबार सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले बिहबिार सूचना पनि जारी गर्दै यातायात कम्पनीलाई भन्यो, ‘सिटक्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउनू ।’
एकातिर व्यवसायीहरुलाई घाटाको पीर छ भने अर्कोतिर यात्रुहरुलाई त्रास साथसाथै कोरोना भाइरसको जोखिम उत्तिकै बढेको छ ।
तर, विभाग यसको अनुगमनका लागि सडकमा आएन । जसका कारण यात्रुले त डरमर्दो वातावरण्मा यात्रा गर्नु पर्‍यो नै, सरकारले संक्रमण फैलन नदिन अपनाएको भनिएको सावधानी कागजमै सीमित रहन पुग्यो ।
निर्णय गर्ने तर, कार्यान्वयनमा चासो नदिने पुरानो चलन यस्ता संवेदनशील विषयमा पनि दोहोरियो । यसका कारण सार्वजनिक सवारी धनी र चालकहरुले पुरानै शैलीमा सवारी चलाइरहेका छन् ।
सडकमा भेटेजति यात्रु चढाउने उनीहरुले यसकै कारण भविष्यमा संक्रमण्म फैलियो भने के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बोध गरेका छैन् ।
‘माइक्रोमा १५–१६ जना राख्दा भरिन्छ, बढी यात्रु बोक्न नदिने हो भने त गाडी चलाउन पर्दैन,’ उनी भन्छन्,‘हामीले पनि बैकको किस्ता तिर्नुपर्छ, घरपरिवार चलाउनुपर्छ ।’
अधिकांश सवारी धनीको भनाइ महर्जनको भन्दा फरक छैन । यात्रुको चाप घटेर यसै पनि पर्याप्त नाफा नभइरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय व्यवहारिक नभएको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
संक्रमण फैलाउने हिसावले सार्वजनिक यातायात सबभन्दा जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । सार्वजनिक गाडीमा गुन्द्रुकुजसरी कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भाइरस संक्रमणको हिसावले यसलाई ज्यादै खतरनाक अवस्था भन्छन्, सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताएका छन् ।
कतिपय सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरुले यात्रुलाई ज्वरो आए, नआएको जाँच गर्न त थालेका छन्, तर बिरामीलाई गाडीमा निषेध गर्न सकिँदैन । यसले गर्दा सार्वजनिक यातायातलाई कोरोना सल्केर बिस्फोट हुने वारुदखाना जस्तो बनाइदिएको छ ।
फेरि सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने अधिकांश यात्रुलाई कसरी सतर्कता अपनाउने भन्ने जानकारी पनि छैन । जानकारी भएकाहरु पनि हेलचेक्र्याइँ गर्छन् । मास्क लगाएर यात्रा गर्नेहरु थोरै देखिन्छन् ।
स्वास र नाक–मुखबाट निस्कने छिटाका कारण स्वास्थ सुरक्षाको हिसाबले सार्वजनिक सवारी त्यसैपनि उच्च जोखिममा हुने डा. पुन बताउँछन् । ‘सार्वजनिक गाडीमा यात्रुहरुबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क–सम्वाद हुन्छ नै’, उनी भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसको यो समयमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा अरु बेलाजस्तै भइरहेको हेल्चेक्रयाईंले ज्यादै खतरनाक सन्देश दिइरहेको छ ।’
प्रकाशित मिति: ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १२:१८